ikhaya AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL USolomon Rondon Ibali leNkcazo kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Gladiator". I-Salomon Rondon Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Fact kuwe i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yentsapho, ibali lobomi phambi kobuqili, ukuphakama kwigama, ubuhlobo kunye nobomi bomntu njl.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba unomntu oyakwazi ukuwamkela okanye ukunyamezela ukulibaziseka komsebenzi, okwenza ibe ngumdlali wegulane ogqithiseleyo kwisigqeba sokuqala. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa uSolomon Rondon's Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwe-ado, masiqale.
USolomon Rondon Ibali leNkcazo yeNgxowa-mali kunye ne-Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UJosé Salomón uRondón Giménez wazalwa ngomhla we-16th ngoSeptemba 1989 kunina, uMaitana Giménez (umgcini wendlu) noyise, uJosé Rafael Rondón (utitshala wechemistry) kwicandelo elininzi labantu baseCatia, eCaracas, eVenezuela. Ngezantsi umfanekiso onguzali bakaSolomon Rondon abathandekayo.
Abazali bakaSolomon Rondon- MOTHER- Maitana Giménez noTATH-José Rafael Rondón (Ikhredithi IG)
Ukuzalwa kukaSolomon uRondon kwakusungulwe ngokulandelwa nguyise owaye wanika ingxelo ngebali lakhe lokuzalwa kwangaphambili.
"Umfazi wam, xa ekhulelwe wayenesisu esikhulu. Kwakhona ngelo xesha, udadewethu wayenomdla Diego Maradona ngenxa yeNdebe yeHlabathi ye-1986. Kuya kuba njalo xa sibona umdlalo apho Maradona wadlala, umntwana uSolomon wayeza kukhaba ngakumbi kwisibeleko sikanina. Ngenxa yoko, udade wam wathi unyana ongezalwanga wayeza kuba ngumdlali webhola lebhola kwaye wayelungile. UJosé Rafael Rondón uyakhumbula.
URondon ekugqibeleni wazalwa njengomntwana wesibini kubazali bakhe kwikhaya lentsapho ephakathi. Wakhula kunye nabazalwana bakhe, uGerardo oneminyaka emithathu ubudala kunye nomntakwabo u-Onlymai oneminyaka engama-3 iminyaka yakhe.
USolomon Rondon Ibali leNkcazo yeNgxowa-mali kunye ne-Untold Biography Facts- Imisebenzi yokuqala
USolomon Rondon waqala ukuhlala esisekuseni lakhe ngokuhamba, ukukhaba nokulala nebhola ubusuku bonke. Kwathatha inxaxheba kwibhola eyayiyinqumle kwizinto ezikhethileyo azikhe wayenza njengomntwana.
"Njengoko ndizalwe ndihlala ndihamba nebhola ndikhaba yonke into. Ngeminyaka emine ubudala ndaqala ukudlala esikolweni sam. "
Ngethuba leminyaka ye-4, uRondon wayemkele izithixo zakhe Rivaldo kwaye URonaldo Luís Nazário de Lima.
Isigqibo sokudlala ibhola ekolweni safika ngolunye usuku xa utitshala kaRondon efuna isincomo sikanina, uMaitana ukuba avumele ukuba unyana wakhe adlale ibhola ekhatywayo enkundleni zesihlamba. Wamkela kwaye uRondon waqala ukudlala ibhola ekolweni esikolweni. Impumelelo yakhe yokuqala yezemidlalo yafika ngexesha leemidlalo zokuncintisana zesikolo apho waphumelela khona.
URondon Ukuphumelela kokuQala kwezemidlalo- Intlawulo kwiqela leGulima
Nangona emva kokubuya esikolweni, ibhola ibingumfuneko. Oku kwenza ukuba abhalise kwiklabhu yakhe yolutsha, iSan José de Calasanz eyamnika ithuba lokudlala ibhola ngexesha lokuhlwa. URondon wasebenzisa ibhola njengomsebenzi oqhelanisiweyo kwizifundo, ezihlala ziphantsi phantsi kolawulo lwabazali bakhe abakha umkhwa wokugcina i-albhamu yezithombe zengane zabo zangaphambili zebhola ezinkumbulo.
Ubaba kaSolomon Rondon ubonisa indlela yakhe yokuqala yokuphila komntwana kwi-albhamu- Credit to Cronica.
USolomon Rondon Ibali leNkcazo yeNgxowa-mali kunye ne-Untold Biography Facts- Indlela eya kwigama
Ukuthanda kukaSolomon uRondon yebhola kwaye kwavakalelwa kukuba, ngezinye izibi kwindlu yakhe yasekhaya. Le yithuba elithile uRondon kunye nomntakwabo uGerardo bafuna ukuwaphula iifestile zabo, ii-candle and vases.
USolomon Rondon waphula iifestile zekhaya kunye nebhola lakhe lebhola njenge-Kid (i-Credit to PixaBay)
Ukufumana ukugxeka okukhulu kubazali bakhe kwaholela ekubeni umama atshele uRondon ukuba kufuneka ahlawule iiglasi xa eqala ukufumana imali njengebhola lebhola.
Ukwenza Isigqibo Esikhulu:
URondon wenza isigqibo esona sikhulu xa wayesemnyaka wakhe wesibini wesikolo esiphakeme saseCalasanz. Wajongana noyise uRafael ukuba abe nento awayeyicinga ingxoxo enzulu kakhulu kunye notitshala wekhemistri.
"Wandixelela ukuba uya kusiya esikolweni ukuze adlale ibhola lebhola," uyise ukhumbula.
USolomon Rondon wagqiba ukwenza isigqibo esingenakutshintsheka sokushiya imfundo yakhe yekholejini nokuzinikela ngokupheleleyo kwibhola. Isigqibo esilandelayo salandelwa nguye ebhalisa kwiqela le-club Deportivo Gulima emva kovavanyo oluphumelelayo.
USolomon Rondon Deportivo Gulima ID yekhadi (I-Credit kwiClubGulima)
USolomon Rondon Ibali leNkcazo yeNgxowa-mali kunye ne-Untold Biography Facts- Ukunyuka Kwigama
Ngexa eDeortivo Gulima, uSolomon Rondon wayenamehlo eYurophu. Ukuze aqhubekele oko, wagqiba ekubeni aqhubeke nenkqubo yakhe yokuvuthwa kwebhola e-Aragua, iqela leColumbian elinomdla wokudlala abadlali beYurophu. URondon wenza impembelelo ngokukhawuleza e-Aragua ibe yinto ebalulekileyo yeendaba zeglabhu.
USolomon Rondon weNdlela yoLwazi (I-Credit CumpleañosdeFamosos)
Impumelelo eqhubekayo yamnyuselwa ekhatyeni eliphezulu lebhulaki emva konyaka emva kokujoyina inxaxheba yabo yolutsha. URondon eneminyaka eyi-17 wenza intetho yakhe kwiVenezuela yasePermael Primera División. Akuzange kuthathe ixesha ngaphambi kokubhalwa njengomhlaseli obalaseleyo kwilizwe lakhe.
Indaba kaSolomon uRondon yeNtuthuko kunye neAragua (I-Credit kuya ku-AS)
Ngaloo nyaka 2008, uRondon amaphupha okudlala eYurophu waba yinyani emva kokuba ekhutshwe UD Las Palmas eSpain. Ethetha ngethuba lomva lokushiya ekhaya, uRondon wambi wathi ...
"Ukushiya intsapho yam eYurophu yinto enzima kakhulu. Amagama okugqibela wam kum kum kuthiwa 'Hamba!' Umama wam wayekhala xa uthetha loo nto. Ndakhala. Ndandingu-19 ngelo xesha. Andikwazi nto - andingazi ukuba ndipheke ... Ndandisoloko ndihlala e-Skype ndithi, 'Mama, ndingayipheka njani ipasta ?!' Umkhulu wam wayefana, 'Beka amanzi epanini kwaye ...!' "
EYurophu, uRondon waphumelela waza wafumana ukudlala eMalaga. Akazange athathe ixesha elide ukuba enze impembelelo kunye neqela. Ubusazi?… Ngethuba elalihlala eMalaga, uRondon okhulayo okhulayo waseRondon washiya umatshini wokukora Ruud van Nistelrooy ukumkhathaza aze kamva amxhomeke emhlalaphantsi.
USolomon Rondon Ukhawuleza Ekuzuzeni Udumo (iMali kwiiNtetho zeeNtetho kunye ne-20Minutos)
USolomon Rondon waqhubeka eyiqhawe ukususela emva kokuxubha uRuud van Nistelrooy. Ndiyabulela kwifomu yakhe, Wadlula i rekhodi yeLaliga iinjongo ezifunyenwe ngumdlali webhola yaseVenezuela Juan Arango. "IUMsindisi kaMalaga"Wayebizwa ngokuba wayezibonele ngokwakhe ekuncedeni iqela laseSpeyin ukuba libalekele.
USolomon Rondon uba nguMsindisi waseMalaga (iNkcitho Instagram)
USolomon Rondon Ibali leNkcazo yeNgxowa-mali kunye ne-Untold Biography Facts- Ulwalamano lobomi
Iimvalo zikaSolomon Rondon yinto engapheliyo ekuhloliseni uluntu ngenxa nje yokuba ubomi bakhe bothando budlala umdlalo. Ngenxa yempumelelo yeVenezuela, kukho umfazi othandekayo kunye neentsana ezintle.
Umfazi kaSolomon Rondon kunye nabantwana (I-Credit kuSolomon Rondon Instagram)
USolomon Rondon nje ngexesha lokubhala ebomini eNewcastle ekholelwa ukuba "sixeko esikhulu"Kwintsapho yakhe. "Umfazi wam, amantombazana amabini, umkhwekazi, umkhulu wam umfazi wam, ndineentsapho zam kum," wathi uRondón,
USolomon Rondon Ibali leNkcazo yeNgxowa-mali kunye ne-Untold Biography Facts- Ubomi bomntu
Ukukwazi ubomi bukaSolomon Rondon kunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo. Ukuqala, ungumntu onendlela yokuphila ebomini eqinisekisa ukuba ubeka isigqibo sokwenza uvuyo ngaphezu kwazo zonke izinto.
Ukuyeka ukufaka iinjongo kwi-pitch, uSolomon Rondon usebenzisa ixesha elixabisekileyo ekwenza umsebenzi webhokisi okholelwa ukuba ukwandisa amandla akhe angaphezulu. Ngezantsi ividiyo efana nokusebenza.
URondon ukholelwa ekukhuseleni ibhola njengemidlalo yokuzikhusela. Kwividiyo engezantsi, uyakwazi ukubeka ibhokisi ekusebenziseni kakuhle ngokufundisa inyana yakhe indlela yokuzikhusela kwaye ungalokothi usebenzise le midlalo njengendlela yokukhangela iingxaki.
Ukusuka kwiSt James 'Park, edlala nabantwana bakhe kunye nebhokisi, uRondon ufumana uvuyo ekuhambeni nenja yakhe.
USolomon Rondon kunye neNja yakhe (iMboleko kwi-Mirror).
USolomon Rondon Ibali leNkcazo yeNgxowa-mali kunye ne-Untold Biography Facts- Ubomi Bentsapho
Ukuba ngumdlali webhola elidumileyo kwilizwe lakhe kunye nommeli weNkulumbuso we-Premier League ngokuqinisekileyo wenza inzala kaSolomon Rondon kunye nelizwe lakhe lonke abantu baziqhenyce ngaye. Abazali bakaSolomon Rondon nabazalwana bahlala eCaracas, eVenezuela ngexesha lokubhala. Leli lizwe elingazinzanga kwezopolitiko ngenxa yenkxalabo yezoqoqosho kunye nezopolitiko.
Izwe likaSolomon Rondon kwi-Turmoil (I-Credit to NBC News and Khilafah)
Ngokwexabiso lokunyuka kwamaxabiso liphuma ekulawuleni, ulwaphulo-mthetho lugonyamelo lukhulu kwaye izinga lokubulala liyatshisa eVenezuela. Ethetha ngeengozi zabaphangi, uRondon utshilo;
"Bambalwa abantu abaziyo intsapho yam kwaye ndizama kangangoko kunokwenzeka ukuba ababonwanga kunye nam - kungekhona eVenezuela. Ukuba ndihleli nabo, kuhlala kuhlala kwintsapho. Asisoze siphume kunye ukuze singabonakali. Ndizama ukungaziboni nantoni na xa ndilapho. "
Naphezu kokukhathazeka, uRondon akanamahloni ukuthatha iifoto kunye nabazali bakhe ngokukodwa ubaba wakhe othandekayo ovela ekubeni ngumfundisi wekhemisti kamva waba nguprofesa wezakhematika kwelinye lezikolo zempi zaseVenezuela.
USolomon Rondon ukuphumla kunye noyise (Credit to Instagram)
USolomon Rondon Ibali leNkcazo yeNgxowa-mali kunye ne-Untold Biography Facts- Inyaniso engekho
Ngegama lakhe lomnxeba:
Ngokutsho isipili, USolomon Rondon wambonisa ukuba uyakuthanda ukubizwa ngokuba ngumnxeba wakhe ... "Urhirho. "Ngexesha lakhe eMalaga. Emva kokujoyina i-Newcastle, abalandeli baqala ukumbiza ngokuthi "Gladiator"Elibizwa ngegama elikhethayo kakhulu.
"Ndiyathanda igama lesidlaliso 'iGladiator'. Yiloo nto endizama ukuyisebenzisa. Ndivula iingalo zam, zibukeka zikhulu, zifumana umzimba wam endleleni kwaye zizame ukulawula ibhola kwiqela lam. "
Emva kokulayishwa kwevidiyo yeGladiator Skills, uRondon wanquma ukwenza abalandeli bakhe baqhubele umncintiswano ngokucela ukuba bathumele iividiyo zabo ngokugqithiseleyo kunye neengcinga nazo zonke izinto ezingekho ⚽ usebenzisa i-hashtag #GladiatorSkillz #Gladiador #Gladiator. Ngezantsi nguSolomon Rondon's Gladiator Video.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda i-Salomon Rondon Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts. Ku LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
Javier Pastore Ibali leNkcazelo yeBanga leNkcazelo ye-Untold Biography Facts